Mayelana NATHI - Zhejiang Hoodland Technology Co., Ltd.
Amandla amakhulu wezobuchwepheshe
Ubuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukisiwe
Isixazululo esihle kunazo zonke
I-Zhejiang Hoodland Technology Co., ltd, esungulwe amashumi eminyaka, ithola indawo esifundazweni saseWenzhou City Zhejiang, igxile ekukhiqizeni imikhiqizo yokuhambisa amandla okuzenzakalelayo yezimboni, njengabalingisi abasebenza ngogesi, amakholomu okuphakamisa kagesi, abaphakamisa ugesi, abaphakamisa ibhukwana njll.
Imikhiqizo yethu ingasetshenziswa kabanzi emkhakheni ohlukahlukene, i-Aerospace, i-Amusement Rides, i-Assembly, i-Automation, i-Automotive, Ukuphathwa Kwemithwalo, Igumbi Elihlanzekile, Isitoreji Sedatha, Ukuzamazama Komhlaba, Imfundo, Iphaneli Eliphansi, Izimboni, Ukufanekisa, Ukuqiniswa Kwesithombe, Ithuluzi Lomshini, Ukuphathwa Kwezinto , Medical, Meteorology, Military, Optics, Packaging, People Moving, Photonics, Equipment Equipment, Energy Renewable, Semiconductor, Test & Inspection njll.
Ukuqinisekisa ukwaneliseka kwamakhasimende ethu, sihlala sisebenza kanzima ukuhlinzeka ngezimpahla ezisezingeni eliphakeme nezethembekile. ILebhu yethu ifakwe imishini yokuhlola efanelekile, yonke imikhiqizo izohlolwa ngokuqinile futhi ihlolwe ngochungechunge lwezivivinyo ngokusho kokucaciswa kokusebenza kwe-canonical kanye nokujwayelekile ngaphambi kokulethwa.
Imisebenzi eyenziwe ngezifiso
Eminyakeni edlule ebesisebenza, sihlangane namanye amakhasimende angakwazi ukuthola ama-actuator afanelekile kusuka kumabanga wethu ajwayelekile, bese sihlala seluleka ngesisombululo esenziwe ngokwezifiso. Ngokuya ngamandla wobuchwepheshe aqinile nobuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukisiwe, umqondo wethu ukufaka inani emikhiqizweni esiyinikezile, bese sikunikeza lokhu ukunikeza izixazululo eziphelele ze-bespoke. Ngokwamukela wonke amathuba, ngokubheka izidingo ezigcwele nezidingo zamakhasimende, ithimba lethu lobuchwepheshe lizohlinzeka ngesixazululo esihle kakhulu.
Ngolwazi olucebile kule mboni, siyaqonda ukuthi ibhizinisi nabantu ngabanye badinga ukuhlala phambili komaki futhi bathuthukise njalo futhi basungule ubuchwepheshe babo. Kulokhu, asihlinzeki nje kuphela ngethimba lokuzinikela lonjiniyela abanolwazi kepha futhi nenqubo ephelele yokuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yakho isebenza kahle. Sigxila ekwakheni izixazululo nokunikeza amakhasimende ethu imikhiqizo emihle kakhulu elingana nendawo yabo yokukhiqiza.
Siyaziqhenya ngokutholakala kumakhasimende ethu, sicela ukhululeke futhi uxhumane nathi ngemininingwane engezansi yokuxhumana, amaqembu ethu okusekela azosiza noma nini nanoma yini lapho edingeka khona.
I-Forage Abavuni Actuator, I-Dc 24v Linear Actuator, Isilinda Actuator, I-Low Noise Linear Actuator, Electric Linear Actuator, Double Acting eyisilinda Actuator,